भखरै बिहे गरेकी सरस्वतीको बिहे गरेको केहि दिनमै मृत अबस्थामा भेटीईन, घरमा सङै सुतेको श्रीमानलाई केहि थाहा छैन ? – Ramailo Sandesh
भखरै बिहे गरेकी सरस्वतीको बिहे गरेको केहि दिनमै मृत अबस्थामा भेटीईन, घरमा सङै सुतेको श्रीमानलाई केहि थाहा छैन ?
सरस्वतीका माईतीहरु यस घटनामा सरस्वती का आफ्नै श्रीमानको मिलोमतोमा यो घटना घटाएको दावी गर्छन्। उक्त श’वको प्रविष्टि हेर्दा शरस्वतीलाई कु ट पिट गरि यस्तो अबस्थामा पारिएको हो भन्ने अभिव्यक्ति उनका माईती पक्षहरुले बताउँछन्। त्यसै माहोल बिच उनकि दिदि पर्ने एक महिला भन्छिन्, त्यसको श्रीमानले गाँ’जा पनि बेच्ने गर्थ्यो स्वयम बहिनिले हाम्रो घरमा आएर भनेकि छे। उनी उनका दिदिहरुको घरमा जाँदा पनि उनको शरीरमा पि’ टे’ का नि’ला डा’महरु देखको उनका दिदिहरु बताउँछन्।
सरस्वती का दिदिहरुले उनीलाई फोन गर्दा कहिल्यै पनि सरस्वतीले फोन नउठाएको र सरस्वती लाई फोन दिनुस भन्दा कहिल्यै नदिएको उनका दिदिहरुको गुनासो छ ।हामीले सरस्वती लाई हामीलाई फोन गर्न भन्दिनुस भन्दा पनि कहिल्यै पनि भन्दिएन। त्यस सरस्वती का श्रीमानसँग पुलिस पनि मिलेको उनिहरुको भनाई छ। हामीले पुलिसलाई फोन गर्दा हाम्रो फोन पनि उठाउदैन।
सशस्त्र प्रहरीभित्र यस्तो नियम भएपछि छायो निरासा